Tikidhada Ciyaaraha Finalka Yurub oo Qiimahoodu Gaaray Meel aan Hore Loo Arag • Horseed Media
You are here: Home / Sports / Tikidhada Ciyaaraha Finalka Yurub oo Qiimahoodu Gaaray Meel aan Hore Loo Arag
Tikidhada Ciyaaraha Finalka Yurub oo Qiimahoodu Gaaray Meel aan Hore Loo Arag
May 10, 2019 - By: Keyse Aadan
Taageerayaasha liverbool, Totenham iyo chelsea ee Ingiriiska ayaa ka cabanaya qoondadada laga siiyay tikidhida ciyaaraha horyaalada qaarada Yurub oo isugu soo hareen afar kooxood oo Ingiriis ah.
Horyaalka horyaalada qaarada Yurub ee Uefa champion leagu oo ciyaartiisa kama dambaysa ah ay isugu hareen kooxaha Liverbool iyo Tottenhum ayaa lagu ciyaari doonaa 01 June garoonka Real madrid ee Bernabow, Halka 29 bishan May, ciyaarta kama dambaysta ee Koobka labaad ee Uefa lagu qaban doonoa Garoonka Olypikada ee Baku ee dalkaasi Aserbajaan.
Taageerayaasha Liverpool and Tottenham ayaa la wadaajiyay 33,226 tikidh oo ay ka helaan 68,000 Tikidh oo xiriirka kubada cagta ee Uefa ay iibin doonaan.
Qiimaha tikidhka ciyaarta dhexmari doontaa Liverbool iyo Tottehham ayaa ah 60 ilaa 513 oo giniga istarliinka, Halka tikidhada lagu daawanayo ciyaarta dhexmari doonto Chelsea iy Arsinal ay tahay 26 ilaa 120 giniga istarliinka.
Mareegaha lagu iibiyo Tikidhada gacanta saddexaad ah ayaa qiimahood wuxuu marayaa 5500 oo giniga istarliinka ah. Sidoo kale qiimaha lagu seexdo hoteelada magaalada Madrid ayaa habeenkii laga dhigay 1300 dollar
Madaxda Kooxaha Ingiriiska iyo Maayarada magaalooyinka Liverbool iyo London ayaa ku tilmaamay Xaalad tikidhada iyo qoondada la siiyay mid laga gef ku ah taageerayaasha mudada dheer lacagaha ku bixinayay taageerada kooxooda marka ay dibada ku soo ciyaarayaan.
Horyaalada Champion leuge iyo Europ Leagu oo ay ku tartamayaan kooxaha ugu wanaagsan qaarada Yurub ayaa sanadkan xiiso gaar ah leh iyadoo ay isugu soo hareen saddex kooxood oo ka dhisan London iyo Kooxda Liverbool, taasi oo noqonaysaa markii u horaysay taariikhda labadaas koob.